GPS / Akụrụngwa - Peeji nke 3 - Geofumadas
Nke a bụ ọrụ mmekọrịta maka imepụta na imelite maapụ maka ndị na-anya GPS. A mụrụ ya na Venezuela mana obere nke nta ọ na-agbasawanye na mba ndị ọzọ Hispanic n'oge ngwa ngwa mkpanaka aghọwo ihe a ma ama na enwere ike ịnweta njikọ Internetntanetị. Otu n'ime akụkọ masịrị m ...
GPS / Equipment, innovations, njem
Ngwọta Zonum bụ saịtị na-enye ngwaọrụ nke nwa akwụkwọ na Mahadum Arizona mepụtara, bụ onye raara onwe ya nye oge isiokwu ya metụtara isiokwu koodu metụtara ngwaọrụ CAD, nkewa na injinia, ọkachasị na faịlụ kml. Ikekwe ihe mere ka ọ bụrụ na ọ bụ n'efu ka a na-enye ha, ọ bụ ezie na ...
Akụkọ a abụkwaghị ihe ijuanya, na oge ndị a mgbe nnukwu ụlọ ọrụ na-azụta n'aka ndị asọmpi ha, jikọta ma kewaa n'ime iberibe; mana obi abụọ adịghị ya ọ na - eme ka anyị chee na ọ nwere ike ime na ụlọ ọrụ rụpụtara akụrụngwa anyị ji ma ọ bụ na - eme atụmatụ inweta. Nye m…
Nke a bụ aha akwụkwọ akụkọ dijitalụ nke ụlọ ọrụ ndị nnọchi anya mpaghara mpaghara Europe nke Sokkia na Topcom, nke dị na Netherlands. Edeziri n'asụsụ Dutch na Bekee n'otu oge, na okwu a na-akpọ "Magazin maka ịhazi ndị ọkachamara", ọdịnaya ya gafere akwụkwọ ndekọ aha dị mfe nke nyocha ngwaahịa ...
Fewbọchị ole na ole gara aga, anyị nwere enyi mkparịta ụka mara mma nke geofumado banyere ojiji m na-enye ugbu a maka ntụgharị uche, ma ọ bụrụ na ndị robot ga-enyere m aka n'ụzọ ọ bụla iji belata oge. Lee m chịkọtara akụkụ nke okwu ahụ. Ihe anyị na-akpọ ọdụ ọdụ robotic. Na nkenke, ọ bụ otu ndị nwere ...
Ọtụtụ afọ nyocha, na ajụjụ a bụkarị nkịtị. Kedu usoro kachasị mma ịdebanye aha? Anyị kwetara na nke a abụghị usoro nri, ebe enwere ọnọdụ dị iche iche a ga-elebara anya na usoro ọ bụla nwere ike ịnwe mgbanwe dị iche na mpaghara dị iche iche. Ya mere, iji nye ìhè ahụ post, ka anyị taa n'akụkụ ụfọdụ ...
Ihe m gwara gị banyere gafere, anyị na-eme nyocha na Magellan Promark3 GPS, Mobile Mapper 6. Mmasị, na na Survey mode enwere ike ịmebe netwọkụ, nke a na-eme nhazi ahụ ọ bụghị naanị na otu kọmputa. Na ọnọdụ ndị a, ọ nwere ike bụrụ ihe ziri ezi na 2 centimeters mgbe ụfọdụ ...
Na ederede ikpeazụ anyị na-ekwu maka data ebudatara na kọmputa Magellan, ọ bụkwa site n'ebe ahụ ka ọ dị mkpa ịkọwapụta banyere nsụgharị dị iche iche nke MobileMapper Office. MobileMapper 6 Office Nke a bụ mpempe ngwanrọ, nke na-abịa mgbe ịzụrụ MobileMapper 6, ọ bụ sọftụwia ọhụrụ, nke na-esite na nsụgharị 1.01.01 ...
Ewepụlarị m ụmụaka ndị a na igbe ahụ, n'ime otu izu anyị ga-eme ọzụzụ iji hụ ka ha si arụ ọrụ. Maka ugbu a, ahụtụbeghị vidiyo na ụfọdụ àgwà ha. Ndị na-eme nkwa nke nkwa 3. N'otu uzo ahụ, na mbụ enwere ma bụrụ ndị ikpeazụ: The Mobile Mapper Pro, ọmarịcha ihe eji egwuri egwu nke gbara gburugburu ...
Ka anyị were ya na anyị kwesịrị iziga onye ahịa otu eserese eserese iji lee na orntanetị ma ọ bụ na onye na-anya GPS ha. Dịka ọmụmaatụ, ibé ahịa anyị nwere maka ọrịre, yana ụzọ ị ga-esi ruo ebe ahụ yana ntuziaka n'ụzọ. Ihe omuma atu ozo nwere ike buru uzo nke uzo ozo nke MODIS nke ubochi ahu, nke ...
Amalitere m ịhụ ụdị a, na njedebe nke ọnwa m nwere olile anya ịme ọzụzụ maka ndị ọrụ ntanetị iji zisa ozi ọma ha. Ruo ugbu a, anyị ejirila Set520K, nke m kwurula banyere ya. Anyị ga-enye ndị omumuihe na njedebe nke May 2010, ma ọ bụ na Honduras ma ọ bụ El Salvador. Ee…
Fewbọchị ole na ole gara aga, anyị hụrụ otu esi ejide data na Mobile Mapper 6, ugbu a, anyị ga-anwa ịme nhazi. Maka nke a, achọrọ ka arụnye ya Mobile Mapper Office, na nke a, m na-eji nsụgharị 2.0 nke na-abịa na ịzụta akụrụngwa. Nbudata data. Practicalzọ kachasị dị irè iji mee nke a bụ iji ...
Nke a bụ ihe atụ nke nsogbu nkịtị, nke na-eme m ugbu a. M nwere nnyocha e mere na mbụ na a na-erughị ezi usoro, ikekwe na GPS, teepu, na compass. Isi okwu a bụ na mgbe anyị na-agbakọta ọnụ ọgụgụ zuru oke, anyị ghọtara na ozi ahụ nwere nrụrụ. Isi okwu ya bụ na ọ bụrụ naanị ị were ...
Obere ihu Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Next page